Fipoahana volkano Hawaii mamorona kalitaon'ny rivotra ratsy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Fipoahana volkano Hawaii mamorona kalitaon'ny rivotra ratsy
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Fipoahan'ny volkano Hawaii mamorona zavona
Ny mponin'i Hawaii sy ny mpitsidika dia asaina miomana sy mahalala ny toe-javatra manodidina azy ireo, sy ny zavatra tsapan'izy ireo na ny mety ho fihetsik'izy ireo amin'ny setroky ny zavona - setroka avy amin'ny volokano - avy amin'ny Nosy Lehibe Hawaii.
Vokatry ny fipoahana iray izay nanomboka omaly avy tao amin'ny vava-vava Halema'uma'u teo an-tampon'ny Volkano Kīlauea dia nitombo sy niovaova ny toetran'ny zavona sy ny haavon'ny rivotra solifara (SO₂).
Ny hetsika eruptive dia ao anatin'ny valan-javaboary volkano Hawai'i, na izany aza, ny fiovaovan'ny rivotra dia niteraka olana ara-kalitaon'ny rivotra miato andrefan'ny tamponanan'ny tampon'isa.
Anisan'ireo faritra voakasik'izany Pahala, Nāʻālehu, Ocean View, Hilo, ary Hawai'i Atsinanana.
Ratsy ny kalitaon'ny rivotra ary mihabe ny SO₂ hatramin'ny taona fanombohan'ny fipoahana Mety hiteraka olana amin'ny fahasalaman'ny taovam-pisefoana, indrindra ireo olona saro-pady. Miova haingana ny toe-javatra, ary mety tsy ho voatanisa ny toerana misy kalitaon'ny rivotra vokatry ny fahasalamana.
Raha misy ny toetran'ny zavona, dia aroso ireto fepetra fisorohana ireto:
Ahena ny hetsika ivelany izay miteraka fisefoana mavesatra. Ny fanalavirana ny hetsika ivelany sy ny fanaovana fanatanjahan-tena mandritra ny toetran'ny zavona dia mety hampihena ny fihenan'ny vatana ary hampihena ny risika ara-pahasalamana. Zava-dehibe indrindra izany ho an'ny vondrona saro-pady toy ny ankizy, ny be antitra ary ny olona voan'ny aretin'ny taovam-pisefoana toy ny asthma, bronchitis, emfisema, ary ny havokavoka sy aretim-po.
Mijanona ao an-trano sy manidy varavarankely sy varavarana. Raha misy «aircon» ampiasaina dia apetraho indray izy io.
Raha mila mivoaka ny faritra misy fiantraikany ianao dia atodiho ny mari-panafanan'ny fiara ary apetraho indray izy io.
Tazomy eo am-pelatanana foana ny fanafody ary mora azo.
Ny fanafody voatondro isan'andro ho an'ny aretin'ny taovam-pisefoana dia tokony horaisina ara-potoana ary mety hiaro anao amin'ny vokatry ny dioksida solifara.
Aza adino fa ny firakofana tarehy sy ny sarontava ampiasaina hisorohana ny fiparitahan'ny COVID-19 dia tsy manome fiarovana amin'ny SO₂ na vog.
Mifandraisa haingana amin'ny dokotera raha misy olana ara-pahasalamana.
Aza mifoka ary aza mifoka sigara.
Misotroa tsiranoka betsaka hisorohana ny tsy fahampiana rano.
Manomàna drafitra vonjy maika ho an'ny fianakaviana sy vonona.
Fampitandremana ataon'ny tompon'andraikitra misahana ny fitantanana vonjy taitra.
Ireo mpitsidika ny valan-javaboary volkano Hawai'i dia tokony hanamarika fa ny riandrano sy ny fipoahana dia afaka mamokatra lavenona vita amin'ny vera volkano sy sombina vatolampy. Ireo rahona ireo dia maneho loza mitatao kely izao, fa ny vovoka lavenona amin'ny faritra manodidina ny tampon'ny Kīlauea dia azo atao.
Ny sampan-draharahan'ny fahasalamana Hawai'i (DOH) dia manentana ny mponina sy ny mpitsidika hampiasa ireto loharano manaraka ireto izay manome fampahalalana feno sy mazava sy ankehitriny momba ny fiatraikan'ny fahasalaman'ny zavona, ny fomba hiarovanao tena, ny vog sy ny vinavinan'ny rivotra, ny kalitaon'ny rivotra, ny fiovan'ny toetr'andro , ary torohevitra ho an'ny mpitsidika:
Dashboard momba ny fampahalalam-baovao momba ny Vog any Hawaii ho an'ny fampahalalana an-tserasera feno sy vaovao indrindra momba ny vog sy SO₂ avy amin'ny hetsika volkano.
Sampana rivotra madio an'ny DOH mitazona tambajotra mpanara-maso ny kalitaon'ny rivotra akaiky indrindra izay mamantatra ny SO₂ sy ny singa bitika.
Fikambanana jeolojika amerikanina (USGS) Fanavaozana ny Volkano Kīlauea.
Serivisy valan-javaboary fampahalalana momba ny fitsidihana soa aman-tsara ny Valan-javaboary Volkano Hawai'i.
Ny tari-dalan'ny DOH momba ny fotoana fohy SO₂ Haavo mpanolo-tsaina.